Yuri BSF BSF • Yuri ဘလော့
ဘလော့ Yuri BSF
By Yuri |7ပင်လယ်, 2019 | မွေးမြူရေးလမ်း Lele ပုလဲ |0မှတ်ချက်
Probiotics နှင့်အတူမွေးမြူရေးထုတ်လုပ်မှု Lele တိုးတက်စေူခင်း? Probiotics အစားအစာတွင်ပါရှိသောဒြပ်ပေါင်းတစ်မျိုးကိုဖြစ်ပါတယ်။ Probiotics ကြေညက်မရနိုငျသညျ, သူသည်အစာခြေစနစ် mikrooraganisme အတွက်၎င်း၏မျိုး၏တိုးတက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အားပေး။ prebiotics ပေးခြင်း ...
အဆိုပါသင့်ကိုယ်ပိုင်ငါးခူ Feed ခေတ် 5-7 နေ့ Make ကဘာလဲ? သငျသညျမြားတဲ့ငါးခူလယ်သမားများအတွက်သင်တန်း၏အစာကျွေးခြင်းကသင့်ချန်နယ်ငါးခူ၏တိုးတက်မှုများအတွက်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ နို့တိုက်ကျွေးသည့်နေဆဲအရွယ်ငါးခူလောင်းကနေစတင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။ ဒါဟာရဲ့ ...
By Yuri |7ပင်လယ်, 2019 | မွေးမြူရေးလမ်း Lele ပုလဲ | 1 မှတ်ချက်
ငါးခူကဘာလဲ? ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာချွဲတစ်မျိုးရှိသောကွောငျ့ငါးခူရေချိုတစ်ဦး elongated ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အတူငါး, ပြားချပ်ချပ်နဲ့ချောနေတဲ့မျိုးစိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကငါးလည်းမိမိနှုတ်ကိုလှည့်ပတ်နေတဲ့နှုတ်ခမ်းမွေးရှိပါတယ်။ lele '' ခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့ '' အဓိပ်ပာယျ, ဂရိ chlaros ကနေဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပါတယ် ...
By Yuri |5ပင်လယ်, 2019 | မွေးမြူရေးလမ်း Lele ပုလဲ |0မှတ်ချက်
အဘယ်အရာကိုကလောက် BSF နဲ့ Palm ငါးခူ Feed ချေး? ပိုး / ပိုးကောင်များ BSF ပိုးကြက်ဥမှဆင်းသက်လာသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူဇာတ်စင်, ရောက်ရှိခဲ့သည်ခဲ့ကြပြီးအနက်ရောင်စစ်သားလောင်း / အနက်ရောင်စစ်သားယင်ကောင်ပျံသန်းဖြစ်ပါတယ်။ လောက် BSF ကျယ်ပြန့်တခုကအခြားရွေးချယ်စရာအစာကျွေးခြင်းအဖြစ်အသုံးပြုခြင်းနှင့် ...
အဘယ်အရာကို EM4 နှင့်အတူအချဉ်ပေါက်ချေးနှင့်ချေးအုန်း Tofu အော်ဂဲနစ်အခြားနည်းလမ်းကိုလုပ်ကျွေးသောကြောင့်ယင်း၏ရရှိနိုင်မှု၏ဝယ်လိုအားသည်လက်ရှိတွင်အများကြီးရှိပါတယ်ပေါများခြင်းနှင့်စျေးပေါစျေးနှုန်းဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါအော်ဂဲနစ် feed ကိုတစ်ခုမှာငါးအဘို့အစာကျွေးခြင်းအဖြစ်အသုံးပြုပါသည်အုန်းသီးပျော့ဖတ်နှင့်ပျော့ဖတ်ဖြစ်ပါတယ် ....
ပြန်ကြားရေး Yuri BSF ဘလော့
အဆိုပါ BSF Yuri ဘလော့ဂ်ထဲမှာသင်သတင်းအချက်အလက်, အကြောင်းအရာ bsf လောက်, လောက် bsf အရေးအသား, drawing, bsf လောက်, လောက်သောဗီဒီယို bsf နှင့်အခြားရလိမ့်မယ်:
အထက်သင်သည်လောက်လယ်ယာစိုက်ပျိုး BSF နှင့် ပတ်သက်. လိုအပ်သည့်သတင်းအချက်အလက်မှပြောပြတယ်။ သငျသညျ, ယူလေ့လာသင်ယူ, ဒီမှာလောက် BSF အကြောင်းကိုဝေမျှနိုင်သောအရာများစွာကိုရှိပါတယ်။
လောက်လယ်ယာစိုက်ပျိုး BSF ၏အစမှစတင်ကာ။ လမ်းလောက်လယ်ယာစိုက်ပျိုး BSF ။ BSF လောက်မီဒီယာဖန်တီးမှုနှင့်များစွာသော laiinya ။
သငျသညျ Yuri BSF က်ဘ်ဆိုက်၌ရှိသမျှအကြောင်းအရာဝင်ရောက်ဖို့အခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။
ထို့အပြင် BSF လောက်လယ်ယာစိုက်ပျိုးအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်မလိုအပ်သောသူတို့အားသူတို့ကိုမျှဝေနိုင်ပါသည်။
သင်တို့သည်ငါတို့၏ web ပေါ်မှာသောအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်ပြီးနားလည်မထားဘူးဆိုရင်။ သင်ပေးထားသောဖုန်းနံပါတ်ခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့်မေးလျှောက်နိုင်ပါတယ်။